Ady amin’ny pesta : niofana ireo lafin-kery maro | NewsMada
Ady amin’ny pesta : niofana ireo lafin-kery maro
Teo ambany fiahian’ny BNGRC na Bureau national de gestion des risques et catastrophes ny fiofanana mahakasika ny ady amin’ny valanaretina pesta, tetsy amin’ny lycée Moderne Ampefiloha (LMA) izay naharitra roa andro.
Niara-nientana tamin’izany ireo minisitera maro toy ny minisiteran’ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrimpanjakana, ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena ary indrindra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Marihina fa avy eto an-dRenivohitra avokoa ny mpandray anjara amin’ity atrikasa ity. Anisan’izany ny sefo fokontany miisa 192, ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ireo minisitera marobe, ny skoto ary ireo olona maro mpilatsaka an-tsitrapo izay miisa 400.
Tanjona amin’izany ny hametrahana paikady amin’ny alalan’ny serasera eo amin’ny olona samy olona manoloana ny fihetsika tokona atao rehefa miseho ny valanaretina pesta. Eo ihany koa ny ahafahana mandresy lahatra ny fiarahamonina amin’ireo tokony hatao ary indrindra, ny fanentanana ny vahoaka amin’ny fisorohana ny pesta. Hidina ifotony ireto mpandray anjara ireto rehefa nahazo fiofanana.